नीति तथा कार्यक्रम झूठको पुलिन्दा | NepalDut
विन्दुकुमार थापा प्रदेशसभा सदस्य
विगतमा पनि आलि देखि थाली सम्म, गोठदेखि ओठ सम्म जस्ता नारा र पोखरा वृहत चक्रपथ निर्माण, पोखरा बसपार्क निर्माणलाई १ करोड छुट्याएको, प्रदेशमा मुटु, मृगौला, क्यान्सर सम्बन्धी विशिष्टकृत अस्पताल निर्माण जस्ता धेरै कुराहरु ल्याइएको थियो । तीनको केही काम अगाडी बढ्न सकेन अहिले पनि तीनै कुरा ल्याइएको छ । चालु वर्षको साढे ८ महिनाको अमुल्य समय त्यसै खेर फालियो । रातो किताबमा परेका महत्वपुर्ण योजना आजका दिन सम्म पनि टेण्डर नभएर बजेट फ्रिज भएका थुप्रै छन् । अत हामीले रातो किताबमा योजना पार्यौ भनेर पनि ढुक्क हुने अवस्था रहेन ।
रातो किताबमा परेका महत्वपुर्ण योजना आजका दिन सम्म पनि टेण्डर नभएर बजेट फ्रिज भएका थुप्रै छन् । अत हामीले रातो किताबमा योजना पार्यौ भनेर पनि ढुक्क हुने अवस्था रहेन ।
हामिले व्यवस्था परिवर्तन ग¥र्यौ तर मानसिकता, काम गर्ने शैली परिपाटिमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौ । कर्मचारीमा बढ्दो राजनितिकरण र सरकारमा पादासिन व्यक्ति पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो र जनताप्रती भन्दा पार्टी प्रती जिम्मेवार भैदिदा कार्यन्वयनमा फितलो भएको छ । व्यापक अनियमितता, अपारदर्शीता, कमिसनको खेल र भष्ट्रचारमा रुमलिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण यो सरकारले १० लाखको योजना पनि विकल्प हुँदाहुँदै हामीलाई अहिले अन्तीम समयमा आएर अनिवार्य टेण्डरमा जानुपर्छ नत्र हुँदैन भन्नु हो किनकी टेण्डरमा जाँदा अटोमेटिक रुपमा भागबण्डा आउँछ । जबकी हामीलाई १ करोडसम्म निर्माण समितिलाई दिन सकिने भनिएको हो ।
प्रदेश नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागी कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागी कोष रु. १५ करोडको स्थापनाको कुरा ल्याएको छ जसमा ३ करोड ३ लाख व्याक्ति र संघ संस्थाबाट थप हुन आई १८ करोड ३ लाख जम्मा भएकोमा आजको दिन सम्म लकडाउनको ७० दिन सम्ममा करिब ७ करोडमात्र खर्च भएको छ । ११ करोड बढी रकम कोषमा बाँकी छ । जनताहरु आरडिटी, पिसिआर टेष्ट गर्न नपाएर छट्पटाएर बसेका छन् जनता खान नपाएर भोक भोकै बस्नु परेको छ । भारतिय सिमाबाट आएका नेपालीहरुलाई सामान्य स्वास्थ्य परिक्षण तथा आरडिटि टेष्ट नगरिकनै स्थानिय पालिकाको जिम्मामा पठाइएको छ ।
त्यो ११ करोड कोषको शिर्षक नाम जस्तै कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रणमा र उपचारमा खर्चिएन । त्यो कोष केका लागी हो, जनताले राहत पाएका छैनन्, भोकभोकै बस्न परेको छ, काम पाएका छैनन् ।
किट कै अभाव देखाउँदै यहाँका क्वारेन्टाइनमा विना टेष्ट अव्यवस्थित र असुरक्षित बस्नुपरेको छ ।
जनता अब कोरोनाबाट भन्दा पनि भोकमरीले र कोरोनाबाहेक अन्य रोगबाट मर्न लागेका छन्, उपचार पाएका छैनन् । मुटु, मृगौला क्यान्सरका साथै दिर्घ रोगीहरु समस्यामा परेका छन् । अब लकडाउनको मोडालिटि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कोरोनासँग सुरक्षित हुँदै लड्दै पनि जाने र संक्रमणको प्रकृति हेरी जोन छुट्याएर ग्रिन जोलाई खुकुलो र रेड जोनलाई अझ कडा गर्न जरुरी छ । नत्र जनता भोकले र रोगले सडकमा उत्रन सक्छन्, लकडाउनको अवग्या हुन सक्छ । जनता आजित भईसकेका छन्, डिप्रेसनमा गइरहेका छन् ।
अब चोरी डकैती लुटपाट बढ्न सक्छ, आत्महत्या बढ्न सक्छ । त्यसैले गण्डकी प्रदेशलाई शिल गरौं, ११ जिल्ला शिल गरौं अनि रेड, यल्लो र ग्रिन जोन छुट्याएर सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर लकडाउन खुलाउँदै जनजीवन सहज बनाउँदै लग्नुपर्छ । आम जनजीवन कष्टकर भएको छ । उद्योग, व्यवसाय कृषी क्षेत्र सबै तहस नहस भएको छ, यातायातको क्षेत्र र विषेषगरि पर्यटन उद्योग नराम्ररी थला परेको छ । यी क्षेत्रलाई उकास्न आर्थीक राहत प्याकेजको जनताले अपेक्षा गरेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा आर्थिक मन्दीको संभावना बढेर गएको छ ।
भरतले पनि यसै आर्थिक मन्दीलाई मनन् गरि ४ पटकसम्म चौथो चरणको राहत प्याकेज ल्याएको छ । हालै भारतीय वित्त मन्त्रीले २० लाख करोडको आर्थिक राहत ल्याइन त्यो भन्दा अघि आरविआईले ५० हजार करोडको राहत ल्यायो । भारतले त कोरोनासँगै लड्दै पनि जाने गरि लकडाउन ३ वटा जोन बनाएर खुकुलो पार्दै लगेको छ । ट्रेन र आन्तरिक उडान निश्चित क्षेत्रमा विषेष सुरक्षाका साथ सञ्चालन गरेको छ । अब सपिङ्ग मल सिनेमा हल र जिम हल पनि क्रमश खोल्दै जाने जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश शिल गरौं, जिल्ला जिल्ला शिल गरौं, एउटा जिल्ला बाट अर्को जिल्लाको आवागमनमा कडाई गरौं र जिल्लाभित्र जनजिविका सहज पारौं ।
हामी पनि भारतिय मोडलको प्रयोग किन नगर्ने ? यो अवसरबाट गण्डकी प्रदेश पछि पर्दै गएको छ । त्यसैले फेरी पनि म भन्छु गण्डकी प्रदेश शिल गरौं, जिल्ला जिल्ला शिल गरौं, एउटा जिल्ला बाट अर्को जिल्लाको आवागमनमा कडाई गरौं र जिल्लाभित्र जनजिविका सहज पारौं । उदाहरणका लागी कास्की जिल्ला नाका कडा पारि जिल्ला भित्र निश्चित मापदण्ड अपनाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई चलाएमान गर्न सकिन्छ किनकी यो जिल्ला ग्रिन जोनमा छ । र यस निति तथा कार्यक्रममा पुनः थप आएको कोरोना कोषको रकम रु. १५ करोड स्वागत योग्य छ । यसको पनि पारदर्शी रुपमा खर्च देखाई आवश्यकताका आधारमा नियन्त्रण र कोरोना उपचारमा खर्चिन कन्जुस्याँई गर्नु हुँदैन ।
विभिन्न तह र तप्काबाट प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथी प्रश्न उठाई रहेको समयमा प्रदेश सरकार मालिक र हामी सांसद माग्ने मान्छे जस्तो चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
विभिन्न तह र तप्काबाट प्रदेशको आवश्यकता र औचित्य माथी प्रश्न उठाई रहेको समयमा प्रदेश सरकार मालिक र हामी सांसंद माग्ने मान्छे जस्तो चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । मानौ मन्त्रीले राज्यकोषको होइन, आफ्नो घरको पैसा वा खल्तीको पैसा दिने जस्तो गर्ने र हामी सांसद त्यो योजना हामीले जनताकोमा नलागी आफ्नै घरका लग्ने हो की जस्तो पिक्चर आँउछ के यो सान्दर्भीक छ ।
आज लकडाउनको ७० दिन पुगेको छ । जनता यस्तो अवस्थामा पर्दा हामी सांसद घरमा थुनिएर बस्यौ के हामी जनप्रतिनिधिको दायीत्व जनतालाई दुखमा साथ दिनु मलमम पट्टी लगाउनुपर्ने थिएन ? ७० दिनमा सरकारले १० केजी चामल १ पटक मात्र दिएको छ के त्यो पर्याप्त थियो ?
११ करोड कोषको रकम खाद्यान्न राहत र पिसिआर किट खरिद र कक्वारेन्टाइनमा खर्च गर्न पनि होइन र ? राहत वितरणमा यत्रो अयिमितता हुँदा राहतको नामावली संकलन, वितरण तथा अनुगमनमा हामीलाई भुमिका दिएको खै ? प्रदेश सांसदलाई भुमिका बिहिन बनाउनु भनेको प्रदेश कै गरिमा घट्नु हो । लोक कल्याणकारी राज्यमा यो सुहाउने कुरा होइन ।
नोट ः मिति २०७७ जेष्ठ १९ गते सोमबार प्रदेश सभामा निति तथा कार्यक्रम माथी छलफल उपर प्रस्तुत भनाई ।